I-European Union Steel: Kulindeleke ukuthi umkhiqizo wemboni yokusetshenziswa kwensimbi ye-EU wehle ngo-12.8% unyaka nonyaka ngo-2020 | Joyina
I-European Iron and Steel Union (i-Eurofer, ebizwa nge-European Iron and Steel Union) ngo-Agasti 5 yakhipha izibikezelo zemakethe zokuthi ukukhishwa kwazo zonke izimboni ezisebenzisa insimbi e-EU kuzokwehla ngo-12.8% unyaka nonyaka ngo-2020 bese kukhula ngo-8.9% ngonyaka ka-2021. Kodwa-ke, i-European Steel Federation ithe ngenxa yokwesekwa nguhulumeni “okunamandla kakhulu”, ukusetshenziswa kwensimbi okunamandla embonini yezokwakha kuzokwehla kakhulu kunezinye izimboni.
Ngokusebenzisa indawo enkulu yokusetshenziswa kwemboni yensimbi, kanye nemboni engathinteki kakhulu kulo bhubhane e-EU kulo nyaka - imboni yezokwakha, kulindeleke ukuthi ukusetshenziswa kwensimbi kulo nyaka kube ne-35% yensimbi ye-EU ukusetshenziswa emakethe. I-European Union of Steel ibikezela ukuthi umkhiqizo wemboni yezokwakha uzokwehla ngo-5.3% unyaka nonyaka ngo-2020 futhi ukhuphuke ngo-4% ngo-2021.
Embonini yezimoto, imboni ye-EU eye yahlaselwa kakhulu yilo bhubhane kulo nyaka, ukusetshenziswa kwensimbi kulindeleke ukuthi kube ne-18% yemakethe yokusetshenziswa kwensimbi ye-EU kulo nyaka. I-European Union of Steel ibikezela ukuthi umkhiqizo wemboni yezimoto uzokwehla ngama-26% unyaka nonyaka ngo-2020 futhi uzokhuphuka ngama-25.3% ngo-2021.
I-European Steel Federation ibikezela ukuthi ukukhishwa kobunjiniyela bemishini ngo-2020 kuzokwehla ngo-13.4% unyaka nonyaka, kubalwa u-14% wemakethe yokusetshenziswa kwensimbi ye-EU; izobuyela emuva ngo-6.8% ngo-2021.
Kwikota yokuqala ka-2020, ukukhishwa komkhakha wepayipi lensimbi le-EU kwehle ngo-13.3% unyaka nonyaka, kepha ngenxa yobudlelwano bayo obuseduze nemboni yezokwakha, kubhekwa njengokuguquguqukayo. Kodwa-ke, isidingo samapayipi amakhulu ashiselwe embonini kawoyela negesi kulindeleke ukuthi sihlale sibuthaka kakhulu. Ngo-2020, ukusetshenziswa kwensimbi embonini yensimbi yensimbi kuzobala i-13% yemakethe yokusetshenziswa kwensimbi ye-EU. I-European Steel Federation ibikezela ukuthi umkhiqizo wemboni yamapayipi wensimbi ngo-2020 uzoqhubeka nokwehla ngo-2019, kwehle ngo-19.4% unyaka nonyaka, futhi kuzoba ne-rebound engu-9.8% ngo-2021.
I-European Union ithe ubhadane olusha lwe-pneumonia lomqhele omusha selukhuphule nakakhulu ukwehla embonini yezinsiza kusebenza ze-EU kusukela kwikota yesithathu yonyaka ka-2018. I-European Union of Steel ibikezela ukuthi ukukhishwa kwemishini yasendlini ngo-2020 kuzokwehla ngo-10.8% ngonyaka ngonyaka, futhi izobuyela ku-5.7% ngo-2021. Ngo-2020, ukusetshenziswa kwensimbi kwale mboni kuzoba ne-3% kuphela yemakethe yokusetshenziswa kwensimbi ye-EU.